Real Madrid, Barcelona Mise Man City? Kooxda Sii Bilaabaysa Heshiiska Ay Ku Doonayso Erling Haaland Oo La Ogaaday - Laacib
Real Madrid, Barcelona Mise Man City? Kooxda Sii Bilaabaysa Heshiiska Ay Ku Doonayso Erling Haaland Oo La Ogaaday
Waxa la filayaa inuu durba sii bilaabmi doono tartanka loo galayo suuqa xagaaga dambe saxeexa weeraryahanka Borussia Dortmund ee Erling Braut Haaland kaas oo heshiiskiisu ogolaanayo in qiimo jaban oo 66 Milyan oo pound ah lagu qaadan karo.
Sida ay sheegayaan wararku, kooxda Manchester City ayaa kor u qaadi doonta xiisaheeda weeraryahankaas iyadoo wakiilkiisa Mino Raiola wadahadalada ay ku doonayso lasii bilaabi doonta bisha January.
Sida uu sheegayo wargeyska The Times, Haaland ayaa haatan ah midka bar-tilmaameedka koowaad u ah tababare Pep Guardiola oo doonaya inuu bedelo Sergio Aguero oo qaab xor ah kaga tagay suuqii sanadkan.
City ayaa si weyn iskugu day-day saxeexa Harry Kane oo Tottenham ka tirsan, iyadoo kabtanka England uu doonayay inuu u wareego Sky Blues ayuu guddoomiyaha kooxdiisa ee Daniel Levy kahor istaagay.
Haaland oo 21 sano jir ah ayaa rekoodh cajiib ah oo dhinaca gool dhalinta ah ku haysta kooxdiisa Dortmund, 67 kulan oo uu ilaa hadda u ciyaaray ayuu 68 gool ugu soo dhaliyay.
Kooxda ay Manchester City magaalo xifaaltamaan ee Man United ayaa dhinaceeda mudo dheer Haaland lala xidhiidhinayaa xilli uu tababaraha kooxdaas ee Ole Gunnar Solskjaer horeba tababare ugu soo noqday mar ay kooxda Molde wada joogeen.
Norwegian-kaas ayaa sidoo kale bar-tilmaameed u noqon kara Paris Saint-Germain haddiiba uu Kylian Mbappe kaga biiro Real Madrid oo aad u doonaysa.
City ayaa filanaysa in saxeexa Erling uu ka caawin doono aabihii Alfe-Inge oo hore ugu soo ciyaaray kooxdooda. Guardiola ayaan xidhiidh wanaagsan la lahayn wakiilka Haaland ee Raiola balse waxa la filayaa inay meel iska dhigi doonaan wixii dhex maray marka ay saxeexa da’yarkaas ka arrinsanayaan.